I-TV-bhokisi ye-nVidia Shield TV Pro 2019: uphononongo, ukucaciswa | TeraNews.net
umbhali UNikitin Eugenius Papashwe ngomhla 23.11.2019
Umlo kwimarike yebhokisi eseti ye-TV ayiphele. Ngelixa ii-brand ezimbini zamaTshayina u-Beelink kunye no-UGOOS besilwa enkundleni, inkampani yaseMelika i-nVidia inikezela ngendalo yayo eyodwa. I-TV-bhokisi ye-nVidia Shield TV Pro 2019, kunye nokusebenza kokujonga umxholo wevidiyo kumgangatho ogqibeleleyo, yenzelwe ukudala ukhuphiswano lomdlalo weconsoles.
Isiteshi esipholileyo seTechnozon sithumele uphononongo lwevidiyo olumangalisayo. Ichaphazela ukuqhelana nomntu wokuqala, ukujonga ngokufutshane isixhobo kunye novavanyo lwentsebenzo (inethiwekhi, imidlalo, imixholo yevidiyo). Zonke iilinki zesiteshi seTekhozon (ukuphononongwa kunye neevenkile) thina, njengamaxesha onke, sipapasha emazantsi ephepha.
I-TV-bhokisi ye-nVidia Shield TV Pro 2019: imigaqo
Ukwenza kube lula ukuba umfundi aqonde ukuba imveliso entsha yahluke njani kwizisombululo eziphambili zaseTshayina, siya kwenza iplate yokuthelekisa. Mhlawumbi oku kuya kunceda umthengi wexesha elizayo kunye nokukhethwa kwebhokisi yeTV kwiimfuno zabo.
Iimpawu nVidia Shield TV Pro 2019 Beelink GT-King Pro UGOOS AM6 Pro
Chipset Tegra X1 + I-Amlogic S922X I-Amlogic S922X
Iprosesa I-4xCortex-A53 @ 2,00 GHz
I-4xCortex-A57 @ 2,00 GHz
I-4xCortex-A73 @ 2,21 GHz 2xCortex-A53 @ 1,8 GHz I-4xCortex-A73 @ 1,71 GHz 2xCortex-A53 @ 1,80 GHz
Iadaptha yevidiyo I-GeForce 6 ULP (GM20B), i-256 CUDA Cores I-GPU Mali-G52 MP6 (850 MHz, 6.8 Gb / s) I-GPU Mali-G52 MP6 (850 MHz, 6.8 Gb / s)
I-RAM I-3 GB (LPDDR4 3200 MHz) I-4 GB (LPDDR4 3200 MHz) I-4 GB (LPDDR4, 2800 MHz)
I-ROM I-16 GB (3D EMMC) I-64GB, i-SLC NAND eMMC 5.0 I-64 GB (3D EMMC)
Ukwandiswa kweROM Ewe, iFles Flash Ewe, amakhadi eememori ukuya kuthi ga kwi-32 GB Ewe, amakhadi eememori ukuya kuthi ga kwi-32 GB
kwinkqubo yokusebenza I-Android 9.0 I-Android 9.0 I-Android 9.0
Unxibelelwano olunentambo Ewe, i-RJ-45, 1Gbit / s Ewe, i-RJ-45, 1Gbit / s Ewe, 1 Gbps RJ-45 port (802.3IEEE 10 / 100 / 1000)
Wi-Fi I-802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz (2 × 2 MIMO) I-802.11 a / b / g / n / ac: 2,4 + 5,8 GHz (MIMO 2T2R) I-802.11 a / b / g / n / ac 2.4GHz / 5GHz (2 × 2 MIMO)
Bluetooth I-Bluetooth 5.0 ine-teknoloji ye-LE I-Bluetooth 4.1 + EDR I-Bluetooth 5.0 ine-teknoloji ye-LE
Ukunyusa umqondiso weSignali ye-Wi-Fi akukho akukho Ewe, i-antennas ye-2 yi-5db
Interfaces I-HDMI, i-2xUSB 3.0, iLAN, DC I-HDMI, i-Audio Out (3.5mm), i-MIC, i-4xUSB 3.0, i-SD (ukuya kuthi ga kwi-32 GB), iLAN, RS232, DC I-AV-out, AUX-in, microSD, LAN, 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0, HDMI 2.0, SPDIF, DC / 12V
Amakhadi okukhumbuza akukho Nawaphi na amakhadi e-SD i-microSD 2.x / 3.x / 4.x, eMMC ver 5.0
4K inkxaso Ewe ulungile I-4Kx2K @ 60FPS, HDR Ewe ulungile I-4Kx2K @ 60FPS, HDR + Ewe ulungile I-4Kx2K @ 60FPS, HDR
ixabiso I-240-250 $ I-140-150 $ I-140-150 $
Ngaba ibhokisi ephezulu yeTV okanye ibhokisana?
Ekuqaleni, ibhokisi yeTV-ibhokisi ye-nVidia Shield TV Pro 2019 ibekwe njengomdlalo weqonga kwiqonga le-Android. Zonke izinto ezijongiweyo zijolise kwintsebenzo ephezulu kwimidlalo. Kwaye okubangela umdla, isimaphambili asiluthintelwa kwaphela kwizicelo ze-Android. Inqaku elipheleleyo kukuba ibhokisi yeTV inokuqalisa ngokulula iithoyi ezivela kwimidlalo ye-nVidia kwizicwangciso eziphezulu. Ewe, zona kanye ezi zisetyenziswa ngabadlali xa bedlala kwikhompyuter yakho okanye kwi-laptop. U-Bubble uthetha ngale nto ngakumbi kwiinkcukacha zakhe zokuhlaziywa ngeyure (ividiyo engezantsi).
Ngokubakho kweShield TV Pro ukudlala umxholo wevidiyo kwifomathi ye-4K, nantsi iodolo epheleleyo. Ukunqongophala kokugcina (ukupholisa okusebenzayo), inkxaso yazo zonke iintlobo zeekhowudi zevidiyo, ukumiswa kwesandi esinelayisensi kwifom efanelekileyo. Kwaye iqela lezinye iisetingi eziluncedo kumsebenzisi ekusebenzeni kwekhonsoli. Eyona nto kufuneka unake kuyo lixabiso lebhokisi yeTV. Ukuba umthengi akacwangcisanga "ukusebenzisa" iithoyi zokudlala ezipholileyo ze-nVidia, kodwa amaphupha ebhokisi ephezulu ye-4K TV, akukho ngqiniseko ekuthengeni iShield TV Pro.
UWill Smith: wayimela inkosikazi yakhe- wabhabha ephuma kwisikolo sefilimu
I-Drone DJI Mini 3 Pro inobunzima be-249 grams kunye ne-optics epholileyo
I-China izama ukuluma isandla sayo-umgaqo-nkqubo welizwe ongaqhelekanga
Umabonwakude-ibhokisi engu-X10 MAX Plus 4/64 kwi-AMLOGIC S905X3
I-Apple Arcade ibonelela ngemidlalo emitsha kwivenkile yeapp
I-AntMiner A3 Siacoin: ukuqala kwemigodi ye-SIA